Aadar Multi Investment Co. Ltd.
आदर मल्टिइन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
आदर ट्रेड मल
किन आदर मल्टिइन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ?
कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत कम्पनि रजिस्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता नं. १६४७२६/०७३/०७४ तथा आन्तरीक राजश्व कार्यालय कर दाता सेवा केन्द्र न्यूरोडमा स्थाई लेखा नं. ६०५९८८१८५ बमोजीम दर्ता भएको आदर मल्टि ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनि लिमिटेड सम्भवत एसिया महादेशकै पहिलो End User Based Crowd Funded Project हो । महाबौद्ध क्षेत्रमा बसेर बिशेष गरी चिनिया सामानको थोक व्यापार गर्ने ५२२ जना ब्यापारीको समान लगानीमा यो कम्पनी स्थापना भएको हो ।
महाबौद्ध क्षेत्रमा यातायात, गोदाम, पार्किङ्ग, सामान ढुवानी, खुल्ला ठाउँ तथा सुरक्षा जस्ता थोक व्यापार का लागि आवश्यक न्युनतम सुविधाहरुको उपलब्धता कम हुँदै गएको तथा घर भाडा र सामान ओसार पसार मा दिन प्रतिदिन समस्या थपिन थालेकाले बिकल्पहरुको खोजी हुन थालेको थियो । त्यही क्रममा २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको महाभुकम्पले बिकल्पको खोजीलाई अपरिहार्य आवस्यकतामा परिवर्तन गरिदियो । महाभुकम्प पछि बिकल्पको खो...
ऋण तथा लगानी
आदर ट्रेड मल का.म.न.पा १४ बल्खुमा ३६ रोपनी जग्गामा बन्न लागेको नेपालकै पहिलो यस किसिमको मल हो। ५२२ जना समान लगानीकर्ताको लगानीमा बनेको यस मल अत्याधुनिक प्रबिधि र व्यवसथापनले युक्त छ। ३ तल्ला र ३ भुमिगत तल्ला सहितको ठुलो एरियामा बनाइने यस मलको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढी रहेको छ। पहिलो तल्ला, दोस्रो तल्ला र तेस्रो तल्लामा पसलहरु हुनेछन। भुमीगत पहिलो तल्लामा पनि पसल हुनेछन। भुमिगत दोस्रो तल्लामा सानो गाडीको पार्किङ र भुमिगत तेस्रो तल्लामा ठुलो गाडीको पार्किङ हुने छ। मलको नक्शा वेबसाइटमा राखिएको छ।
आदर ट्रेड मल ५२२ लगानीकर्ताले ८५० करोड लागानी गरेर सुरुवात गरीएको छ।
यस मलका सबै तलाको पसलहरु एरियाको आधारमा विभिन्न व्यकतिलाइ विभिन्न मुल्यमा हस्तानतरण गरिने छ। बुकिङको काम सुरु भइसकेको छ र बुकिङ फारम वेबसाइटबाट पनि भर्न सकिन्छ।
कार्यलय कहा अवस्थित छ?
कार्यलय पशुपति प्लाजाको दोस्रो तल्ला, खिचापोखरी-२२, काठमाडौमा अवस्थित छ।
के एक भन्दा बढि पसल किन्न पाइनेछ?
एक भन्दा बढि पसल किन्न पाइनेछ। तर सेयरहोल्डरको लागि विशेष प्राबधान गरिएको छ।
कति किस्तामा पसलको लगानी गर्न पाइने छ र लगानीको सर्तहरूके हुनेछन?
१६ किस्तामा लगानी गर्न पाइने छ। तर किस्ताको मिति कटिसके पछि बुकिङ गर्न आउनेले जति किस्ताका अवधि बाकि छ त्यति किस्तामा तिर्नु पर्ने छ। जस्तै ३ किस्ताको अवधी कटिसकेको छ भने १३ किस्तामा पनि पसल किन्न पाइने छ। तर प्रति किस्ताको रकम बढ्ने छ। सर्तहरुको बारेमा जानकारी लिन लगानी गर्नु अगाडी कार्यलयमा छलफल गर्न सकिनेछ। डिस्काउन्टको पनि प्रावधान राखिएको छ।
आदर ट्रेड मलको बुकिङ कहिले उपलब्ध हुनेछ?
आदर ट्रेड मलको बुकिङ छिटै उपलब्ध हुनेछ। वेबसाइट मार्फत सुचना दिइनेछ।
Aadar Mulit-Investment Co. Ltd
Aadar Subsidiary Limited
करीब ३६ रोपनी जग्गामा निर्माण हुने यस आदर ट्रेड मल व्यापारीहरुले लामो समय देखि न्यु रोड, महाबौद जस्ता ठाउमा भोग्दै गरेका समस्याको समाधान निश्चित छ। आदर ट्रेड मलको सफलताको लाग्नु भएको टिमको लागि धेरै आभारी छु।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, मन्त्र आइटि सोलुसन
आदर मल्टिइन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको लागि सधै सहयोगी र सहयात्रामा साथ दिनुहुने सबै साझेदारहरुमा हामि सधै आभारी छौ। हाम्रा विशेष साझेदारहरुको नाम निम्नरुपमा तल उल्लेख गरिएको छ।
पान नम्बर : ६०५९८८१८५ | दर्ता नम्बर : १६४७२६/०७३्/०७४
कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत कम्पनि रजिस्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता नं. १६४७२६/०७३/०७४ तथा आन्तरीक राजश्व कार्यालय कर दाता सेवा केन्द्र न्यूरोडमा स्थाई लेखा नं. ६०५९८८१८५ बमोजीम दर्ता भएको हो ।
पशुपति प्लाजाको दोस्रो तल्ला, खिचापोखरी-२२, काठमाडौ
© 2021 प्रतिलिपि अधिकार आदर मल्टिइन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड